Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: #OromoProtests TOKKUMMAAN LAGANNEE, INJIFANNOON GOOLABNE
#OromoProtests TOKKUMMAAN LAGANNEE, INJIFANNOON GOOLABNE
Waamicha qabsaa'onni mana hidhaa Qilinxoo godhaniin Qaammee 1, 2008 irraa hamma har'a Fulbaana 2, 2009 duullii lagannaa bittaafi gurgurtaa godhamee jira. Duulli kunis haala eeggamee oliin milkaa'ee har'a injifaannoon goolabamee jira. Boru ganama sa'aa 1:00 , Fuulbaana 3, 2009 irraa eegalee sochiin diinaggee bakka duraanitti deebi'a.
Dhiibbaa waliigalaa diinagdee lagannaan kun mootummaa Wayyaanee irraan gahe guyyoota as deemanitti hayyoonni keenya gadi fageenyaan kan xiinxalan ta'a. Dimshaashatti garuu, duulli kun:
- Kan tokkummaan Oromo Oromiyaa guututtii ammas irra deebi'ee hojii qabatamaadhaan madalamee mikanaa'e .
-Ummanni keenya bilisummaa isaatiif jecha aarsaa dhuunfaafi waloo (personal and collective sacrifice) kamiiyyuu kaffaluuf kan qophaayeefi danda'u ( willing and able) akka ta'e kan ifatti haalaan raggaasise dha.
-Dhugaa Oromoon cufti beeku, utubaan diinaggee biyya sanii Oromiyaa ta'uu alagaan dhihoofi fagoo akka qabatamaan hubatu kan dirqisiise. Tarkaanfilee qabsoo gara fuulduraa fudhatamuu malaniifiis jabinaafi laafina akka hojiidhaan adda baafannuuf hiree guddaa uumee jira.
-Hirkoo sirna wayyaanee keessaa hangafa kan ta'ee diinaggee daran laamshessuun kufaatii isii saffisiisuun danda'amee jira. Kana caalaa garuu murannoo, tokkommaafi cimina ummata Oromoo arguudhaan daran akka birbinyitu (psychological panic) godhee jira. Kanaafuu ilmaan Oromootin injifannoo cululuqaa kana goonfachuu keessaniif galatoomaa, baga gammaddanis jechuu feena; Keessattuu: -
-Ummanni keenya bal'aan kan yeroo ayyaanaa kanatti bittaa lagate
-Qonnaan bulaa keenya kan yeroo silaa omisha isaatiif gabaan hoo'aan jiru gabaa geessuu lagate
-Daldaltoota keenya kan yeroo silaa bu'aa guddaa argatanitti dhaabbilee isaanii dhaabaniif
-Konkolaachiftoota motora isaanii dhaamsuun daandilee oromiyaa qullisaniif
-Hojjattoota mootummaaf dhaabbilee dhuunfaa kan doorsisa aangawootaa diduun hojii dhaabanii waajjiroota duwwisaniif
- Qeerroo Oromoo kan warra uggura kana diige adabuun seera eegsistan, akkasumas warra uggurri kun rakkise bira dhaabachuun aantummaa agarsiiftan
-Manguddootaafi abbootii amantii ummata jidduu ta'uun qaamaa-qalbiin isaa akka tokkoomuuf tajaajiltan Walumaa galatti hundi keessanuu shoora keessan bifa bilchinaafii murannoo qabuun waan baataniif, duula kana bifa firaaf diinnis ajaa'ibsiifateen injifannoon xumurtanii jirtan. Kaayyoo kumataamni itti wareegame fuuldura furgaafachiiftanii jirtan. Galannii keessan bilisummaa biyya teessanii haa ta'u. Tarkaanfilee qabsoo itti aanan yeroo gabaabaa keessatti kan walbeeksufnu waan ta'eef afuura baafadhaa, ofirratti nu caqasaa jechaa, birraan kun barii bilisummaa akka nuuf ta'u hawwina, hojii keenyaanis ni dhugoomsina.
Dhugaa qabna, tokkummaan qabsoofna, tarsiimoon maskamna
Posted by Hasan Ismail at 1:56 PM